Maydka Saxafi Jamal Khaashoqji Oo Laga Raadinayo Kaymaha Turkiga | Berberatoday.com
Maydka Saxafi Jamal Khaashoqji Oo Laga Raadinayo Kaymaha Turkiga
October 19, 2018 - Written by Berbera Today
Istanbul(Berberatoday.com)-Sida ay wararku sheegayaan booliiska Turkiga ayaa ballaadhiyey baadhitaanka ay ku hayaan kiiska Saxafigii Sucuudiga u dhashay ee la sheegay in la dilay Jamal Khashoggi.
Saraakiil Turki ah oo aan la magacaabin ayaa sheegay in laga yaabo in maydkiisii lagu aasay kayn ama dhul beereed aaggaas ka dhawayd.
Mr Khashoggi ayaa la waayey kadib markii 2-dii bishan October uu galay qunsuliyadda uu Sucuudigu ku leeyahay magaalada Istanbul, halkaas oo saraakiisha Turkigu ay sheegayaan in lagu dilay.
Xukuumadda Sacuudi Carabiya ayaa sheegaysa in aanay waxba ka ogayn wax ku dhacay weriyahaas.
Waxaa socda baadhitaan lagu samaynayo waxyaabo loo malaynayo in ay caddaymo noqon karaan oo laga soo qaaday todobaadkaan qunsuliyadda Sucuudiga iyo hoyga madaxa qunsuliyadda, lagana baadhi doonaa hidda sidaha Mr Khashoggi.
Khamiistii, ayaa sarkaal sare oo Turki ah waxa uu BBC News u sheegay in Xoghaya Arrimaha Dibadda Maraykanka Mike Pompeo uu dhagaystay cod ku aaddan dilka la sheegay in loo gaystay saxafigaas, balse arrintaas ayuu goor dambe beeniyey.
Turkiga ayaa horay u sheegay in uu hayo cod iyo muqaal caddayn u ah dilka Mr Khashoggi, balse caddaymahaas wali dadweynaha looma soo bandhigin.
Dhacdadaan ayaa sababtay in xukuumadda Riyadh uu culays badani kasoo fuulo dhanka reer galbeedka ay xulufada yihiin, wasiirka maaliyadda Maraykanka Steven Mnuchin iyo Xoghaya ganacsiga caalamiga ah ee Britain Liam Fox ayaa noqonaya masuuliyiintii sarsare ee ugu dambeeyey ee qaaddaca shir ballaadhan oo ganacsi oo ka dhacaya Riyadh toddobaadka dambe.
Shir madaxeedka ayaa waxaa marti galin doona dhaxal sugaha Sucuudiga Mohamed bin Salman si uu kor ugu qaado ajendihiisa isbaddalka.
Si kastaba ha ahaatee, sharikado badan oo waaweyn ayaa wali danaynaya in ay ka qayb galaan shirka, inkastoo ay jirto qaaddacaad isa soo taraysa.